Indlela Yokuthola risotto: imfihlo eshukumisayo njalo
Lokhu dish nje kubonakala nzima ukuba balungiselele futhi ezingafinyeleleki zokupheka evamile, ukubonisa amathalente abo kuphela ekhaya. Eqinisweni, i- recipe for risotto kuyinto aphansi - uma uchitha isikhathi kuso, ukuze nje kugcwaliseke zonke izincomo bese ulandela izeluleko labapheki abanolwazi.
Ngokuthakazelisayo, e-Italy - ezweni of izitsha - risotto ukulungiselela cishe zonke umndeni, kungakhathaliseki isimo sabo emphakathini noma zezimali inhlalakahle. Ngaphezu kwalokho, zonke wekhaya kwenza lokhu dish ngokuvumelana zabo okuthandwa siqu kanye akuthandayo, usebenzisa ezihlukahlukene izithako. Kukhona iresiphi risotto kwasolwandle, izitsha ngenyama, inhlanzi noma inyama yenkukhu, risotto nge porcini amakhowe nemifino. Lezi izitsha ingalungiswa phezu izinhlobo zemifino noma inyama umhluzi, ilayisi degrees ekuzimiseleni obuhlukahlukene. Ngokuvamile, ningakwazi nonke usebenzise okumnandi kakhulu ukukhiqizwa lesi sidlo - kulokhu ungaqiniseka ukuthi izakhiwo ezuzisayo yimiphi imikhiqizo ngeke ilahleke. labapheki Abaningi bathi it is Cuisine Italian bungeke okufanayo - ngaso sonke isikhathi sokuqala futhi eyingqayizivele, unrepeatable.
Okubaluleke kakhulu, udinga ukuthola nokulungiselela ephelele, kuba eshukumisayo njalo, uwoyela eliphezulu (e-Italy wanquma ukusebenzisa ibhotela noma amafutha omnqumo njengoba kuqhathaniswa esifundeni) benomhluzi fresh (mhlawumbe inkukhu). Ngomqondo onabile, inkulumo isobho kuyingxenye ebalulekile ngaphandle okuyinto risotto iresiphi ngeke kube khona, ngakho uma ungenawo inkukhu esandleni - ungathatha semifino, kodwa kuphela ibhotela, kwakhiwa emva yokuwugazinga inyama. Ngaphezu kwalokho, kufanele sikhumbule ukuthi lesi sibalo ukulungiswa ukudla ayikwazi wageza, kungenjalo kuzonyamalala zonke isitashi luyadingeka ukudla kwabantu futhi ukunambitheka kwako esiyingqayizivele. Kungcono uma risotto irayisi isitashi inike ngesikhathi ngamathumba kancane nge elishukumisayo eyingqabavu phezu isikhathi isikhathi eside.
Lapho wonke amalungiselelo wokulungiselela, esakhiwa ngo ukupheka umhluzi eqinile kuqedile, usukulungele ukudala isidlo esihlwabusayo ku iresiphi zakudala Italian. Kufanele kuthathe i irayisi (400 g.), Onion (1 igoli.) Futhi garlic (3 izinyo.), Amafutha omnqumo ne bhotela (50 ml.), Iwayini White futhi vermouth (150 ml.). Futhi, kufanele kuqashelwe ukuthi isamba weparmesan ushizi (80 g.), Ophehliwe (30 ml.) Namakha ukunambitheka. Ukusebenzisa le iresiphi risotto, kumelwe oyi-efudumele inkukhu noma yemifino umhluzi, hhayi abilayo futhi ibangele njalo. Ngesikhathi esifanayo, kwenye ukushisa pan amafutha omnqumo kufanele kube, lapho kamuva ethunyelwe Fig. Uma olinganise ziyagcinwa ngendlela efanele, sibalo kuyoba ukuthosa Crackle kancane, kodwa hhayi wokushiswa. Nokho, kusasele imizuzu embalwa kamuva, ngo-pan efanayo ungathumela ingxenye kwesigamu ibhotela, onion oqoshiwe nesweli.
Ngemva kwemizuzu engu-Five, lapho irayisi ukuyaluza eyingqabavu iyoba uhlanganise ukunambitheka lakho siqu nezinye izithako, sizokwazi ukuba uthele iwayini ezimhlophe futhi vermouth bese uqhubeke yokosela kahle, kuze ivolumu ukudla akuyona encishisiwe ngisho ngesigamu. Kubalulekile kakhulu ukuthi angayeki sibhebhezela ingxube - bazolokhu kuzoba, ayanda izinga risotto esiphelele. sibalo Landelayo ingathunyelwa umhluzi - ncamashi isamba yokuthi isidlo sasifana isobho awugqinsi, engasekho, akukho kancane.
Ngemva yilokhu okuyomane sihambisane ukupheka risotto phezu ukushisa low ngaphandle kokuba usivumele ubilise, kodwa ukugwema ukuthi amazinga okushisa ayengaphezu uphansi kakhulu, kungenjalo isitashi kusukela irayisi ngeke kususwe. Futhi asikwazi bayakhohlwa eshukumisayo njalo - uma kungenjalo risotto uyozishisa futhi ulahlekelwe kwesigamu nezimfanelo zayo okuzuzisayo ukunambitheka.
Ekupheleni ukupheka - lapho irayisi sikhula esitsheni, ungakwazi ukwengeza ukhilimu, ubeke eceleni imizuzu embalwa isidlo unezinkolelo amanzi ngokweqile. Khona-ke ungakwazi kakade engeza ukuze amakha risotto kanye seasonings ukunambitha kanye ukuthumela etafuleni - eduze ukushaya amathalenta yayo Culinary.
Isitayela sauce kuKhesari
Yini sipheke umlilo cauldron? Ungadliwa for cauldron. Sakaza-yensimbi cauldron nge cast iron isivalo
Ingulube cutlets futhi inyama ngaphansi sauce ashisayo - zokupheka okumnandi ingulube izitsha
Kungani abesifazane ngaphambilini indlela eya eNtabeni Athos?
Amanzi Pokemon: izici, lapho ukubamba lokho umuntu ngokumelene nobani bangalwa?
Namanabukeni "Umkhumbi": ukubuyekezwa kanye incazelo
Odlule izinto evamile: umlando nightgowns
Shampoo Dessange: Ukwakheka, imiyalelo, ukubuyekezwa
Ithini inombolo ezithakazelisayo ZOPO?
Setha i-eqoshwe: ukudala yobuciko izithelo nemifino ngezandla zakho!
Ukusekelwa - kuyini? Meaning, omqondofana nezibonelo
Njengoba wenza izingubo isiphanyeko ngezandla